ဗဟိုဘဏ်ထံမှ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုချက်ကို OK Dollar ရရှိ
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က OK Dollar အား မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင် ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရာ နည်းပညာအခြေပြု ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများ တရားဝင်၊ မဝင်နှင့် ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်သည့် မရေရာမှုများ အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများလည်း ပေါ်ထွက်လာသည်။.
မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားရှိသူများကိုသာ ပြန်လည်လက်ခံမည်ဟု အစိုးရက ပြောကြား
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသူများအနက် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အထောက်အထားပြနိုင်သူများကိုသာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဟု မြန်မာအစိုးရ အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အိန္ဒိယက အခမဲ့ဗီဇာထုတ်ပေးမည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်သွားရောက်လိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အခမဲ့ဗီဇာ ထုတ်ပေးမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်က ကြေညာခဲ့သည်။
“ယခင်ကလည်း ထိုသို့ဆူပူမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်များကို တွေ့နိုင်ကြောင်း” ဦးထင်ကျော်ကပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ တစ်သိန်းခွဲခန့်အထိ ရှိလာ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာရသည့် ဒုက္ခသည် တစ်သိန်းခွဲခန့်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့က ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းများအရ သိရသည်။
ချင်းတောင်တန်းပေါ်က ပထမဆုံး ကောလိပ်ကျောင်း
လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစ၍ ချင်းပြည်နယ်တွင် ပထမဆုံးအဖြစ် နိုင်ငံတော်က ဖွင့်လှစ်ပေးသော တက္ကသိုလ်အဆင့် ကောလိပ်ကျောင်းက ဦးနှောက်ယိုစီးမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အသိပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
ကျပ် ၇ ဘီလျံတန် ချေးငွေသဘောတူညီချက်ကို ရိုးမဘဏ်နှင့် Proximity Designs တို့ လက်မှတ်ထိုး
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၅ ကျပ် ၇ ဒသမ ၃ ဘီလျံတန်ဖိုးရှိ ဆန်းသစ်သည့် Back to Back Funding Agreements အတွက် Proximity Designs နှင့် ရိုးမဘဏ်တို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်ဟု ရိုးမဘဏ်က ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ မြန်မာဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် အသင့်အတင်သာ.
လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးနှင့်အတူ တပ်မတော် ဂျက်လေယာဉ်တစ်စီး ပျောက်ဆုံး
တပ်မတော်(လေ)မှ လေ့ကျင့်ပျံသန်းရေး G-4 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးသည် လေယာဉ်မှူးနှင့်အတူ ယနေ့နံနက်ပိုင်း ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။